UFO.io 1.4.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.9 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း UFO.io
UFO.io ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ဤကိုဖတ်ပြီးသောအခါယခုညာဘက်ကိုဖတ်ရှုနေသည်အကြင်သူသည်စေရန်, ငါပြီးသားအများဆုံးဖွယ်ရှိသေပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှုအရာခက်ခဲတဲ့တယ်သောအခါတစ်နှစ် 2018 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့အားယောက်ျားတွေကိုမြေကြီးဆီသို့ရောက် လာ. , လက်ျာဘက်အပြီး, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆီကအရာအားလုံးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဤတွင်ကျွန်မအိပ်မက်ဆိုးထဲကနေခဲ့မှတ်ဉာဏ် ............... ဖြစ်ပါသည်
အခုတော့ကြောင့်ကောင်လေးရဲ့ memory သို့အရတစ်ဦးအာကာသယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ပိုကြီးအောင်ရှေ့၌သင်တို့ကိုအရာအားလုံးဖမ်းပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုငျသညျဖမ်းပြီးသည်ပိုမိုအားကောင်းသငျသညျဖြစ်မည်, မြင့်သငျသညျအရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ get နဲ့သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏သူသည်မြေကြီးတပြင်ပြသပါ။
သင့်ရဲ့အာကာသယာဉ်၏ညှနျကွားထိန်းချုပ်ရန်သင့် screen ပေါ်မှာပွတ်ဆွဲပါ။ သငျသညျ aviating နေကြသည်နေစဉ်, သငျသညျထမြင့်ရန်သင့်လမ်းအပေါ်တတ်နိုင်သမျှအရာများစွာကိုဖမ်းပြီး။ ဂိမ်းအနိုင်ရရန်သင့်အာကာသယာဉ်ပိုကြီးနှင့်ပိုမိုအားကောင်း Make
လူပျိုနှင့် multiplayer mode
UFO.io အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
UFO.io အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
UFO.io အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
UFO.io အား အခ်က္ျပပါ
blacknwhitekid စတိုး 3.24k 804.05k
UFO.io ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း UFO.io အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.9
ထုတ်လုပ်သူ NoahCube Studio
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/view/ufoioprivacypolicy
လက်မှတ် SHA1: 76:2E:15:3B:81:A2:E9:2D:C5:64:4A:44:B8:B3:1C:83:DF:EB:5B:AB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): noahcube
အဖွဲ့အစည်း (O): noahcube
UFO.io APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ